नेपालमा कहाँ-कहाँ किन्न पाइन्छ श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी, महिलाले कसरी किन्ने ? – Jagaran Nepal
नेपालमा कहाँ-कहाँ किन्न पाइन्छ श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी, महिलाले कसरी किन्ने ?
काठमाडौ । नेपालमा श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी किन्न पाइन्छ । राजधानी काठमाडौमा त गल्ली गल्ली र चोक चोकमा किन्न पाइन्छ ।
काठमाडौका मुख्य स्थलमा रहेका केही होडिङ बोर्ड र भित्र राखिएका पसलका सामानले त पक्कैपनि के यो प्रश्न नगर्ला ?
यो रूढिवादी समाजमा सांस्कृतिक विचलन की क्रा’न्ति ? हो यही प्रश्नले हामी यसको केही खोजी गर्न लाग्यौँ ।
तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथीमा नेपालीको दिलच’स्पी बढ्दै गएको पाइयो । श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथीको रुपमा यी प्रयोग भइरहेका छन् ।
नेपालको राजधानी काठमाडौका प्रमुख बाजार बीचबीचमा रूढिवादी समाजमा सांस्कृतिक क्रा’न्तिको दृष्य देखिन्छ ।
अझै यो यस्तो समाज जुन तस्विरमा देखिएका चित्र र त्योसँग जोडिएका क्रियाकलापका बारे सार्वजनिक चर्चा भने अझैपनि हुन सक्दैन ।
घरमा सबै परिवार बसिरहेका बेला परि’वार नियो’जनका सा’धनको विज्ञापन आयो भने अझैपनि परिवारका सदस्य रातोपिरो भएर मुख लुकाउँछन् । तर यो श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथीको ब्य’पार भने गज्जब भइरहेको छ ।
मञ्जीत पौडेल र प्रवीण ढकालको श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी पसलमा हामी पुग्दा अनौठो क्रा’न्ति भइसकेको देखियो ।
उनीहरुले म’हिला पु’रुषको खे’लसँग सम्बन्धित कृ’त्रिम श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी बेचेर नै लाखौ कमाइसकेका छन् । श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी बेच्ने उनीहरुको दैनिकी छ ।
केही बर्ष पहिलेदेखि यी पौडेल र ढकाल मिलेर ‘स्वी’ट सी’क्रेट’ नामको एक पसल खोलेका थिए । यो नेपालको वैधानिक पसल हो । जसले शहरमा होडिङ बोर्ड राखेर नै कपडा पसल चलाए जस्तै खुलेर राखेको छ ।
जब की छिमेकी मुलुक भारतमा धेरै कुरा बैधानीक छ तर यो पसल बैधानिक छैन । यो पसलमा यस्तो राम्रो ब्यपार छ की उनीहरुले अरु शहरमापनि शाखा विस्तार गरिसकेका छन् । उनीहरु देशका विभिन्न शहरमा यस्ता पसल सुरु गर्ने तयारीमा छन् ।
यस पसलमा ठूलो आकारका गु’डियादेखि अनौठा र बलिया खालका श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी छन् । उनीहरुले प’रिवार नि’योजनका वि’भिन्न भे’राईटीका सा’धनहरुपनि राखेका छन् । यसबाट राम्रो कमाई भएको उनीहरुको दावी छ ।
दैनिक १०० ग्राहक आउछन् १० जना त महिला नै हुन्छन्
यो पसलबाट निक्कै राम्रो आम्दानी छ । प्रवीण ढकाल बताउँछन् अहिले हरेक महिना तीन देखि चार लाख सम्मको ब्यपार छ । यो पसल खोल्दा सुरुमा हामी निक्कै चिन्तित थियौँ ।
राज्यबाट अनुमति त लिइयो । कतै यसको बिरुद्धमा प्रर्दशन पो हुने हो की । यसलाई बन्द गर्न अनेकौ उल्झन पो आइपर्ने हुन् की भन्ने चिन्ता थियो । तर त्यो चिन्ता मनको चिन्ता मात्र बन्यो हामीलाई केही समस्या आइपरेन । अब त बर्षौ बिताई सकियो । समस्या टर्यो ढकालले भने । अब म’ज्जाले कमाइ गरिरहेका छौ ।
कम्पनी दर्ताको समयमा केही झमेला खेप्नु परेको थियो । यसको सम्भावना र लाभका बारेमा राज्यका अधिकारीलाई निक्कै बतायौँ । ढकालले भने त्यसैले दर्ता गर्दा प्रवन्ध पत्र, नियमावलीमा नै उल्लेख गरेर “विभिन्न प्रकारका कृत्रिम पुरुष र महिला अं’गयु’क्त श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी आयात गर्ने, त्यसलाई नेपाली बजारमा बेच्ने । भनेर खुलायौँ । हुन त दुनियाँका धेरै देशमा यस्ता श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी बिक्रि भइरहेका छन् । तर हामीलाई अलिक कठिन भयो उनले भने ।
‘’स्वी’ट सी’क्रेट’ नामक पसल शहरका मुख्य मुख्य स्थानमा छन् । तर ग्राहक भने सुटुक्क आउँन खोज्छन् । ढकाल बताउछन्, “काठमाडौमा हाम्रो पसलमा मात्र दैनिक १०० भन्दा बढी ग्राहक आउँछन् । यसमा १० प्रतिशत महिला ग्रहक नै हुन्छन् ।
जो ग्राहकलाई पसलमा नै आएर किन्न अप्ठ्यारो लाग्छ उनीहरुलाई अनलाईन सेवा दिइएको छ । ढकाल भन्छन् एक तिहाइ अर्डर त अनलाईन नै आउँछ र होम डेलिभरी नै हुन्छ । हामी अनलाईनमा च्याटबाट बुकिङ्ग गर्छौ, फोन र मोबाईलबाट अर्डर लिन्छौ उनले भने ।
यो त एउटा पसलको आँकडा हो । अब यस्ता पसल कयौँ भइसकेका छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक हजारौ संख्यामा श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी बिक्रि हुन थालिसके । किनकी काठमाडौको नयाँ बानेश्वर, सुन्धारा, परानोबसपार्क, नयाँबसपार्क लगायतका कयौ स्थानमा दर्जनौ पसल छन् ।
मञ्जीत पौडेल बताउछन् की, “पसलमा आउँने ग्राहक धेरैजसो ३० बर्ष आसपासका हुन्छन् । पुरुषले भ्रा’इब्रे’टर र गु’डिया कि’न्छन् । म’हिलाले अं’ग ख’रिद ग’र्छन् । पौडेलका अनुसार धेरैजसो ग्राहक यस्ता हुन्छन् उनीहरुका जीवनसाथी कोही न कोही देश बाहिर हुन्छन् महिलाले किन्छन् भने पुरुष विदेश गएका हुन्छन् ।
पुरुषले किनिरहेका छन् भने कि उनीहरु अबिबाहित छन् की उनीहरुका श्रीमती देश वा आफू बसेभन्दा बाहिर छन् । यति मात्र हैन । विदेशमा भएका श्रीमानले फोन गरेर घरमा भएकी श्रीमतीका लागि श्रीमान, श्रीमती नहुँदाका साथी अर्डर गर्छन् ।
फोन र अनलाईन अर्डर अनुसार उनीहरुले घरमा सामान पुर्याईदिन्छन् । आधिकारीक आँकडा अनुसार २० लाख भन्दा बढी पुरुष विदेशमा छन् । उनीहरुका संगिनी नेपालमा छन् । यसले अचुक काम गरेको विश्लेषण छ । यसले समाजमा विग्रह आउन रोकेको छ । महिलाहरु श्रीमान पर्खिएर बर्सिने आधार बनेको छ । अनेकौँ रोगबाट बचाएको छ । यसको श्रेय धेरै नै छ भन्दा फरक पर्दैन ।
यो व्यपारले समाज बिगार्नुभन्दा केही सहज बनाएको आँकलन गरिन्छ । बाध्यताको सारथी सावित बनेको बताइन्छ । तर केही बिरोध गर्नेहरु भने छन् । नेपाली संस्कृति जानकार मुकुन्द राज आर्यल भन्छन्, “यो स्वाभाविक हो उमेर पुगेका युवा युवतीहरु बन्धनमा बाधिँएपछिपनि विदेश जानु परेको छ ।
लामो समयसम्म एक्ला एक्लै रहनु परेको छ त्यस्तो समयमा यो एकदम कामलाग्दो बनेको छ । यो सामग्रीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहेको छ । जसले परिवारबाट टाढिएकाहरुका लागि सारथीको भूमिका खेल्छ । त्यसले एक अर्काबीचको प्रेम कायमै राख्दछ । यसले भावनाको सुत्रमा एक अर्कालाई जोडेको छ । भिडियोमा एक अर्का एकसाथ नै छौ जस्तो गरेर हुने क्रियाकलापमा यो सारथी बनिदिन्छ । यसैलेपनि आफ्नालाई भुल्न सकेका छैनन् । यसले समाजलाई नै एकताको सुत्रमा राखेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेद वा समाजमा गलत कार्यलाई नियन्त्रण गरेको छ । आर्यल भन्छन् अहिले नेपालमा उपभोक्तावादी संस्कृतिको द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ । रुढिवादी सोच र संस्कृती पराजित हुँदै गएको छ । त्यसकै एक उदाहरण हो स्वीट सीक्रेट ।
यसो त यो राजधानी काठमाडौमा मात्र हैन । धरान, इटहरी, विराटनगर, जनकपुर, बीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, दाङ, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका अधिकांश सहरमा अहिले शाखा खुलिसकेका छन् । यसले सबैलाई पहुँच पुग्नेगरी विगतभन्दा अहिले व्यापार गरिरहेको छ ।